Ogaden News Agency (ONA) – ISBAHAYSIGA DADADKA XORIYADA IYO DIMUQRAADIYADA (PAFD)
Bayaanka Shirwaynaha 1aad ee PAFD
Taariikhda: March 25, 2016 Tiradda Tixraca: STM01 / PAFD /2016
Wufuuda Dhaqdhaqaaqa Xoraynta Dadka Benishangul (BPLM), Dhaqdhaqaaqa Xoraynta Dadka Gambela (GPLM), Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeenya (JWXO/ONLF), Jabhada Xoraynta Oromada (OLF), iyo Jabhada Wadaniga Xoraynta Sidama (SNLF), baalaha haweenka iyo dhalinta jabhadaha xoraynta ee matalaya dadadka ay ka soo kala jeedaan iyo damacyada dhamaan qaramada ku dulman Itoobiya waxay isugu yimaadeen Asmara, Eritrea inta u dhaxaysay March 21 iyo March 25 oo ahaa Shirwaynaha Guud ee Isbahaysiga Dadadka Xoriyada iyo Dimuqraadiyada (PAFD).
Wufuuda ayaa ka wada hadlay ku sugnaanshaha guud ee halganka ay kula jiraan xukunka kaligii-taliska ah ee Itoobiya iyo waayo-aragnimadooda wadareed. Wufuuda ayaa sidaas oo kale si faahfaahsan uga baaraandegay xaalada tagan ee Itoobiya, kuwa Geeska Afrika iyo dunida iyaga oo dejiyay haykal iyo siyaasad lagu hago halganka hor-u-marineed ee xoriyada iyo dimuqraadiyada Itoobiya.
Waxa uu Shirwaynuhu doortay hogaanka PAFD, gudiga fulinta iyo saraakiisha waaxaha ururka si ay ugu qabtaan hawlaha ilaa shirwaynaha Golaha Guud ee xiga. Waxaa intaa sii dheer, wufuuda ayaa si dhamaystiran uga wada hadlay, ansaxiyayna qaynuun qabyo ah, xeerar-hoosaad iyo dokumentiyo kala duwan oo Isbahaysi.
Waxa uu Shirwaynuhu, sidaas oo kale, ku baaqay in dhamaan qaramada ku hoos jira Itoobiya ay u mideeyaan halgankooda xaqa ah riditaanka xukunka hada ee kaligii-taliska ah. Waxaa dheeraad sii ah, waxa uu Shirwaynuhu ugu baaqay beesha caalamka in ay joojiyaan taageerida xukuumada axmaqa ah ee hada ee Itoobiya. Waxa uu Shirwaynuhu shuruud la’aan cambaareeyay dilalka ka socda dhamaan Itoobiya. Si gaar ahna, waxaa uu Shirwaynuhu si adag u cambaareeyay cadaadiska axmaqa ah ee hada lagu hayo banaanbaxayaasha aanan hubaysnayn ee Oromiya ee ay fulinayaan ciidamada TPLF.
Gebagebadii, waxa uu sidaas oo kale Shirwaynuhu cambaareeyay u badheedhida xadgudubyada xuquuqda aadamaha iyo barakicinta reer miyiga ee degaanada Amxarada, Benishangul, Gambela, Konso, Omo, Oromiya, Ogaadeenya iyo Sidama. Gaar ahaan, waxa uu Shirwaynaha PAFD sii cambaareeyay shirkadaha caalamiga ah ee xukuumada Itoobiya la maleegaya bulshada xoola-dhaqatada ah si ay u dhacan khayraadkooda dabiiciga ah iyaga oo si buuxda uga barakicinaya degaanada ay dabiiciga u leeyihiin ee Ogaadeenya, Omo, Gambela, Benishangul iyo qaybo kale oo Itoobiya ah.
NABAD, DIMUQRAADIYAD IYO XUQUUQ DHAB AH OO AAYO-KA-TASHIGA DADADKA